Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း)
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။5ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း) ကဘာလဲ။
နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်းဆိုတာ နှလုံးအပေါ်ခန်း နှစ်ခုအကြားမှာ အပေါက်ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးရာပါကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ အပေါက်တွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပဲ သူ့ဖာသာ ပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့နှလုံးအပေါက်ကတော့ နှလုံးနဲ့ အဆုတ်တွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေဟာ ပြသနာမပေးဘဲ မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ရှိရတာများပါတယ်။ နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်းကို သတိမထားမိဘဲ ကြီးပြင်းလာသူတဦးဟာ နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်းတို့ကြောင့် သက်တမ်းစေ့ မနေရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေ မဖြစ်ဖို့ ခွဲစိတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။
Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်းဟာ ရှားပါးပါတယ်။ မွေးကတည်းက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်းရှိတဲ့ ကလေးအများစုဟာ လက္ခဏာ မပြတတ်ပါဘူး။ အရွယ်ရောက်လာသူတွေမှာတော့ အသက် ၃၀မှာ လက္ခဏာတွေ ပြလာတတ်ပါတယ်။ လူတချို့မှာတော့ ဆယ်စုနှစ်တွေ ကြာသည့်တိုင် လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။
လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ရှူရခက်ခြင်း (အထူးသဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ်)
ခြေထောက်၊ ခြေဖမိုး၊ ဝမ်းဗိုက်ရောင်ခြင်း
နှလုံးညဉ်းသံကို နားကြပ်ဖြင့် နားထောင်လျှင် ကြားရခြင်း
Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မွေးရာပါဖြစ်ပြီး နှလုံးစတင်ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာ မှားယွင်းမှုရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အကြောင်းအရာတွေဟာ အရေးပါပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘယ်လိုစဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိရပေမယ့် မွေးရာပါဖြစ်ပြီး မိသားစုတွင်းမှာ မျိုးရိုးလိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တခြားမျိုးရိုးဗီဇပြသနာ (ဥပမာ ဒေါင်းရောဂါစု)နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မိမိမှာ နှလုံးပြသနာရှိနေရင် (သို့) ကလေးမှာ ပြသနာရှိနေရင် နောက်ကလေးထပ်ယူတဲ့အခါ မျိုးရိုးဗီဇကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ နှလုံးချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်စေမယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရူဘဲလားရောဂါပိုးဝင်ခြင်း။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပထမပိုင်း ၃လမှာ ရူဘဲလား (သို့) ဂျာမန်ဝက်သက်ပေါက်ရင် ကလေးရဲ့ နှလုံးချို့ယွင်းနိုင်ခြေကို ပိုများစေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မူးယစ်ဆေး၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်နဲ့ တခြားအရာတွေ ဥပမာ ကိုကိန်း စတာတွေ သုံးစွဲခြင်းဟာ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဆီးချို၊ Lupus။ ဒီပြသနာတွေရှိရင် ကလေးမှာ နှလုံးချို့ယွင်းနိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်း။ အဝလွန်ခြင်းဟာ ကလေးနှလုံး ချို့ယွင်းနိုင်ခြေ များစေပါတယ်။
Phenylketonuria (PKU)။ PKU ပြသနာရှိပြီး လိုက်နာရမယ့်စားသောက်ပုံတွေကို သေချာစွာ မလိုက်နာရင် ကလေးမှာ နှလုံးပြသနာရှိနိုင်ပါတယ်။
Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကလေးနှလုံးကို နားကြပ်နဲ့ နားထောင်လို့ ပုံမှန်မကြားရရင် ဒီပြသနာကို ပထမစဉ်းစားကြပါလိမ့်မယ်။ တခြားအကြောင်းနဲ့ နှလုံးကို ပုံရိပ်ဖော် စစ်ဆေးချိန်မှာလည်း နှလုံးအပေါ်ခန်း ချို့ယွင်းခြင်းကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်းလို့ ယူဆရင် အောင်ပါစစ်ဆေးမှုဗတွကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်း။ အသံလှိုင်းများကတဆင့် ဗီဒီယိုပုံရိပ်ဖော် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး နှလုံးအပေါ်ခန်း အပေါက်ပါခြင်းအတွက် အဓိကစစ်ဆေးတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးအခန်း အခြေအနေတွေနဲ့ ညှစ်အားကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဆို့ရှင်တွေကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ကုသမုနည်းလမ်းကို ဆုံဒးဖြတ်နိုင်ဖို့လည်း သုံးပါတယ်။
ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်။ နှလုံးနဲ့ အဆုတ်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးအပေါက်ပါခြင်းထက် တခြားပြသနာတွေကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာ သိနိုင်ပါတယ်။
အီးစီဂျီ။ နှလုံးရဲ့ လျှပ်စီးလှုပ်ရှားမှုတွေကို သိနိုင်ပြီး နှလုံးစည်းချက်ဆိုင်ရာ ပြသနာတွေကိုလည်း သိနိုင်စေပါတယ်။
နှလုံးပြွန်ထည့်ခြင်း။ ပျော့ပြောင်းတဲ့ပြွန်လေးကို ပေါင် (သို့) လက်မောင်းမှတဆင့် ထည့်သွင်းပြီး နှလုံးဆီရောက်စေပါတယ်။ အဲဒီကတဆင့် မွေးရာပါ နှလုံးပြသနာတွေ၊ နှလုံးညှစ်အား၊ အဆို့ရှင်တွေရဲ့ ပြသနာတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ အဆုတ်ရဲ့ သွေးဖိအားကိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းဟာ နှလုံးအပေါ်ခန်း အပေါက်ဖြစ်ခြင်းကို ရောဂါအမည်တပ်ဖို့ထက် ပြုပြင်ဖို့ သုံးကြပါတယ်။
MRI ရိုက်ခြင်း။ သံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး နှလုံးအပါအဝင် တခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကိုလည်း ပုံရိပ်ဖော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အသံလှိုင်းနဲ့ ပုံရိပ်ဖော်ပြီး နှလုံးချို့ယွင်းမှုကို မတွေ့ရရင် ဒီနည်းကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
CT ရိုက်ခြင်း။ ကွန်ပျူတာ ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးနည်းဖြစ်ပြီး ဓါတ်မှန်ရောင်ခြည်ကနေ နှလုံးရဲ့ ပုံရိပ်အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ အသံလှိုင်းနဲ့ ပုံရိပ်ဖော်ပြီး နှလုံးချို့ယွင်းမှုကို မတွေ့ရရင် ဒီနည်းကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Atrial Septal Defect (နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အများစုဟာ ကလေးဘဝမှာပဲ အလိုလိုပိတ်သွားပါတယ်။ မပိတ်တဲ့အခါမှာလည်း သေးငယ်တဲ့ အပေါက်တချို့ဟာ ပြသနာမရှိတတ်ပါဘူး။ တချို့ကတော့ ခွဲစိတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အချိန်အတိုင်းအတာတခုမှာ ပိတ်သွားခြင်း ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ ကုသဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး၊ တခြား မွေးရာပါပြသနာတွေ ရှိမရှိကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆေးဝါးများနဲ့ နှလုံးအပေါက်ကို မပြင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက္ခဏာတွေ လျော့ပါးသွားအောင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းကို မှန်အောင်ထိန်းပေးတဲ့ ဘီတာလမ်းကြောင်းပိတ်ဆေး၊ သွေးခဲခြင်းကို လျော့စေမယ့် သွေးကျဲဆေး စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကလေးဘဝမှာတွေ့တဲ့ နှလုံးအပေါ်ခန်းအပေါက်ကို ခွဲစိတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှဖြစ်လာတဲ့ ပြသနာကို ကာကွယ်ဖို့ ဆရာဝန်အများက သဘောတူကြပါတယ်။ အလယ်အလတ်ကနေ ကြီးမားတဲ့ အပေါက်အထိ ပြုပြင်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုးရွားတဲ့ အဆုတ်သွေးကြော သွေးတိုးခြင်းရှိရင် ခွဲစိတ်ဖို့ သဘောမတူကြပါဘူး။
လူကြီးတွေရော ကလေးတွေမှာပါ ခွဲစိတ်ခြင်းဟာ အပေါက်ကိုပိတ်ခြင်း၊ ဖုံးခြင်း စသဖြင့် ပါဝင်ပါတယ်။ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်နည်းက အသင့်တော်ဆုံးလဲ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်း (၂)မျိုးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးပြွန်ထည့်ခြင်း။ ပေါင်ခြံက သွေးကြောထဲကို သေးငယ်တဲ့ပြွန်လေးကို ထည့်သွင်းပြီး ပုံရိပ်ဖော်နည်းကိုသုံးကာ နှလုံးဆီကိုပို့ပါတယ်။ ပြွန်ထဲကတဆင့် ဆန်ကာအဖုံး၊ ဒါမှမဟုတ် အဆို့ကို အပေါက်ဆီပို့ပြီး ပိတ်ပါတယ်။ ဆန်ကာကွက်နားမှာ တစ်သျှူးအသစ်ပေါ်လာပြီး အမြဲတမ်းဖုံးသွားပါတယ်။ secundum အမျိုးအစားမှာ ဒီနည်းကို သုံးပါတယ်။ တချို့ကြီးမားတဲ့ secundum အမျိုးအစားမှာတော့ ဒီနည်းကို မသုံးနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအခါမှာတော့ နှလုံးခွဲစိတ်ကုသရပါတယ်။
နှလုံးခွဲစိတ်ခြင်း။ မေ့ဆေးပေး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ နှလုံးနဲ့အဆုတ် ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ စက်လိုပါတယ်။ ရင်ခေါင်းကိုဖွင့်ပြိး အပေါက်ကို ပိတ်ပါတယ်။ primum, sinus venosus, coronary sinus စတဲ့ အမျိုးအစား နှလုံးအပေါက်တွေမှာ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ပါတယ်။ တချို့ခွဲစိတ်ခြင်းတွေမှာတော့ ခွဲစိတ်ရာသေးသေးပဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။
အပေါက်ကို ပြုပြင်ပြီးချိန်မှာ ပုံရိပ်ဖော်နည်းနဲ့ စစ်ဆေးပါတယ်။
ပြသနာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ပြန်လည်ချိန်းဆို ကြည့်ရှုပါတယ်။ ကလေးဘဝမှာပဲ ပိတ်သွားတဲ့ အပေါက်အတွက် ရံဖန်ရံခါ ချိန်းဆိုခြင်းပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
အသက်ကြီးမှ ခွဲစိတ်ကုသထားသူတွေကိုတော့ အဆုတ်လမ်းကြောင်းသွေးတိုးခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်ခြင်း စတဲ့နောက်ဆက်တွဲသြနာတွေကို စစ်ဆေးဖို့အတွက် ပုံမှန်ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက နှလုံးအပေါ်ခန်းချို့ယွင်းခြင်းအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
လေ့ကျင့်ခန်း။ နှလုံးအပေါ်ခန်း အပေါက်ဖြစ်ခြင်းဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကနေ မကန့်သတ်ထားပါဘူး။ အဆုတ်လမ်းကြောင်းသွေးတိုးခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်ခြင်းစတဲ့ ပြသနာတွေရှိနေရင်တော့ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နည်းလမ်းက ဘေးကင်းလဲဆိုတာ ဆရာဝန်က လမ်းညွှန်နိုင်ပါတယ်။
စားသောက်မှုပုံစံ။ အသီးအရွက်၊ အစေ့အဆန်၊ အဆီ ကိုလက်စထရော ဆိုဒီယမ်နည်းတဲ့ အစားအစာများ စတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံဟာ နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ တပတ်မှာ ငါးကို ၂ကြိမ်၂ကြိမ်စားပေးခြင်းဟာ ကောင်းမွန်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း။ နှလုံးရဲ့ တချို့အနေအထား ပြောင်းလဲခြင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေ တွယ်ငြိပြီး ရောဂါ (နှလုံးအခန်းရောင်ခြင်း) ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်တော့ နှလုံးအခန်းရောင်ခြင်းနဲ့တော့ မဆက်စပ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် နှလုံးအပေါက်ပါခြင်းအပြင် တခြားနှလုံးပြသနာတွေ ရှိနေရင်၊ ခြောက်လအတွင်း နှလုံးအပေါက် ခွဲစိတ်မှု လုပ်ထားရင် သွားမနုတ်ခင်၊ ခွဲစိတ်မှုမလုပ်ခင် ပဋိဇီဝဆေးတွေ သောက်သုံးဖို့ လိုပါတယ်။
သိလိုတဲ့အချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့် ကုသမှုများကို မပြုလုပ်ပေးပါ
1. Atrial septal defect (ASD). http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atrial-septal-defect/basics/definition/con-20027034. Accessed3Mar 2017
2. Atrial septal defect (ASD). https://medlineplus.gov/ency/article/000157.htm. Accessed3Mar 2017
3. Atrial Septal Defect (ASD). http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/CongenitalHeartDefects/AboutCongenitalHeartDefects/Atrial-Septal-Defect-ASD_UCM_307021_Article.jsp#.WLmF9juGPIU. Accessed3Mar 2017
သွေးတိုးသမားတွေ သိထားဖို့ လိုမယ့် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေ